Iwo akanakisa kuseka emanoveli
Ongororo yenyaya dzekusetsa
MuLake Success, naGary Shteyngart
Zvinogona kunge zviri izvo Ignatius Reilly aive ad hoc munyama weDon Quixote. Kanenge mupfungwa dzake dzemupengo dzakanamira muchiitiko chekurwisana nemhepo dzemhepo dzakaitwa hofori nekufungidzira kunofashukira. Uye pasina kupokana Barry Cohen, protagonist wenyaya iyi naGary Shteyngart, ane zvakawanda…
Miss Merkel. Nyaya yachaishenera chancellor
Iwe hauzomboziva nemikova ino tenderera kune avo vanosiya zvematongerwo enyika. MuSpain zvinowanzoitika kuti vaimbove mapurezidhendi, vaimbova makurukota uye rimwe boka revatungamiriri vari pamudyandigere vanoguma vatora mahofisi asingatarisirwe mumakambani makuru. Asi Germany yakanyatsosiyana. There…
Kutsiva Kwakanaka, naJonas Jonasson
Zvaive zvasara. Iko kuseka. Uye Jonas Jonasson anoziva zvakawanda nezvazvo. Kuona kwake kwekuseka kunomuisa kune antipode yemafambiro ezvinyorwa zveSweden kunyanya uye Nordic mune zvese. Uye kuita sekupokana, kufamba uchipesana neyazvino zvakare kune mibairo yayo dzimwe nguva ... Mune izvi ...
Shamwari nekusingaperi, naDaniel Ruiz García
Crápulas zvisingatarisirwi. Zvakajairika pakati paVa Hyde naDorian Grey zvekuti chero munhu ane makore anodarika makumi mana ekuberekwa anogona kutambura pavanodzoka kubwinya kwehusiku mushure mekutendera makore mashoma ekurera vana kuti apfuure, emitambo yeSvondo isina kumbofungidzirwa isati yasvika ...
Zuva muhupenyu hwaMwari, naMartín Caparrós
Pamazuva manomwe akasikwa nyika naMwari, ini ndaizogara neiya iro mugadziri wedu akarara pahuswa kuti afungisise nezvebasa. Ini ndinofunga ingangove hangover Mugovera kana Svondo, handicharangariri. Vachaitsanangura pano ... Asi ivo chinhu chimwe ...
Iye Murume Aive Sherlock Holmes, kubva kuMaximum Prairie
Munyori ane mukurumbira (uye munguva yake yekufa muridzi wepiano) Joseph Gelinek anodzoka zvakare kubva muzana rake regumi nemapfumbamwe uye panguva ino anoshandisa zita rake rekunyepedzera Máximo Pradera kutipa runyorwa pamusoro pekuparadzaniswa kwehunhu uye nyonganiso idzo dzinovhiringidza, semuenzaniso. ..
3 akanakisa Christopher Moore mabhuku
Kuseka uye zvinyorwa, zvinowirirana uye zvakakosha, zviwanikwa uye zano. Kunze kwezviitiko zvakasarudzika senge zvaChristopher Moore, kuseka kunowanzo kuwedzerwa kutikurudzira kunyemwerera. Tingaite sei kuti tisayeuke nepfungwa iyi "Kurangana kwemapenzi" naKennedy Toole, mumwe wevanogutsa ...
Paza bhokisi. Mabhuku akanakisa ekuseka
Kana panguva iyo isu takataura kuti iyo inotyisa genre inobata nechimwe chinhu senge chaicho munhu sekutya, kana tichitarisa nyaya yezvinyorwa zvinosekesa isu tinobatanawo neatavistic manzwiro emweya. ZVINOKOSHA ZVINODIWA, naTom Sharpe Kurangana kweVapenzi, naJohn Kennedy Toole A ...